Instagram ပေါ်မှအခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုပိတ်ဆို့မလဲ Androidsis
Instagram သည်နေ့စဉ်သန်းပေါင်းများစွာအသုံးပြုသော application ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောလူမှုကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုထည့်သွင်း။ လျှောက်လွှာတွင်သင်၏အကောင့်ကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသူတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့နိုင်ပြီးထိုလူကိုသင်ပိတ်ဆို့လိုက်နိုင်သည်။
အကြောင်းပြချက်များစွာရှိနိုင်ပါသည်၊ သို့သော်သင့်အကောင့်အားဤနည်းဖြင့်မမြင်နိုင်မည့်သူအားသင်ပိတ်ပင်ထားသည်။ သို့သော်၊ ခဏကြာလျှင်၊ သင်သည်ဤလူအားနောက်တဖန်မပိတ်ချင်တော့ပါ။ ဤကိစ္စတွင် Instagram ကကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုသည်. ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ။
၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သင်ပိတ်ထားသောသင်အသုံးပြုသူ၏အမည်ကိုသင်မှတ်မိခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်၊ ၎င်းကိုအက်ပ်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်ရှာဖွေနိုင်သည်၊ သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုထည့်သောအခါသော့ဖွင့်ခလုတ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်အမည်ကိုမမှတ်မိလျှင် Instagram ကကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ထားသောအကောင့်အားလုံးကိုသိမ်းသည်။
ဒီအခြေအနေမှာ၊ ငါတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုသွားပြီး၊ ညာဖက်အထက်ဒေါင်လိုက်သုံးစင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ထွက်ပေါ်လာသောရွေးချယ်မှုများအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည် configuration ကိုနှိပ်ပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ရှာသည်အထိဆင်းသွားရန်ရှိသည် ပိတ်ဆို့အကောင့်ကိုခေါ်အပိုင်း.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုရိုက်ထည့်ပြီး Instagram ပိတ်ထားသော Instagram profiles များစာရင်းကိုတွေ့ရသည်။ ငါတို့လုပ်ရမည့်အရာသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့သော့ဖွင့်ရန်စိတ် ၀ င်စားသောပရိုဖိုင်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပရိုဖိုင်းကိုထည့်သောအခါ, ကျနော်တို့သော့ဖွင့်ခလုတ်ကိုအပြာပုံပေါ်သောမြင်လိမ့်မည်။ ငါတို့လုပ်ရမယ့်တစ်ခုတည်းသောအရာ ဤနည်းအားဖြင့်၊
ငါတို့ဒါကိုလုပ်တဲ့အခါ ကျနော်တို့ Instagram ကိုအပေါ်အသုံးပြုသူက unblocked ပါပြီ။ သင်၏စာပမြေားကိုငါတို့ထပ်မံတှေ့မွငျရမညျ၊ ထို့အပြင်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်နိုင်သည်။ ဒီဟာကသင့်ကိုစိတ်ပူစေတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်၊ အသုံးပြုသူတွေကိုအမြဲတမ်းအသံတိတ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်တစ်လှမ်းထပ်လှမ်းလိုလျှင်၊ သင်နောက်လိုက်များကိုဖျက်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Instagram ပေါ်ကတစ်ယောက်ယောက်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ